Golaha wasirada Galmudug yeeshay shir Deg Deg ah iyo Go’aamo ay soo saareen. – Balcad.com Teyteyleey
Golaha wasirada Galmudug yeeshay shir Deg Deg ah iyo Go’aamo ay soo saareen.
By Maxamuud Axmed	 On Oct 1, 2017
1. Inay si buuxda u ayideen go’aankii Barlamanka DGGM 30-09-2017 ee ka dhacay xarunta KMG ee cadado.
2. Golaha wasirada waxay ayidayaan go’aanka Maxkamada sare ee galmudug ee ka qadatay kooxdii afgambiga dhicisobay soo abaabushay ee ay ugu yeertay inay sharciga horyimaadaan.
3. Golaha wasirada waxa ay ka digayaan cawaqib xumada ka dhalan karta in kooxdii laga so abaabulay villa Somalia ay soo saaraan go’aano kale kuwaas oo qalqalin kara amniga.
4. Golaha wasirada waxa ay so dhaweynayaan gogosha kismaayo ee dowlad goboleedka Jubaland u fidisay Dowlad Goboleedyaa si looga wada xaajoodo xaladaha adag ee siyasadeed ee dalku uu wajahaayo kuwaas oo dib u dhac ku keeni kara qorshoyaalkii horumarineed ee la hiigsanayey.
5. Dowlada Federalka ee Somalia waxaa uu goluhu uso jedinaa inay ilaaliso hanaanka federal-ka dalka isla markaana ay ka shaqeyso xasilooni siyaasadeed taas oo dalka u horseedi karta horumar iyo midnimo.
6. Golaha wasirada waxa ay soo dhaweynayaan dadaalka IGAD ee wada hadalka ASWJ iyo Galmudug iyadoo laga codsanayo in la dadajiyo si midnimada iyo wada jirka bulshada Galmudug loo gaaro.
7. Golaha wasirada waxa ay ugu baqayaa Dowlada dhexe iyo saxiibada Dowlad Goboleedyada in galmudug lagu tageero hanaanka sharciga iyo kala dambeynta, isla markaana ay tixgaliso tabashada Dowlad Goboleedyada dalka.
8. Ururka goboleedka IGAD, AU, UNSOM, iyo dhamaan saxiibada beesha calamka waxaa laga codsanayaa inay laba jibaraan taageradooda Somalia iyadoo waliba dalka uu kujiro xalad adag ee abaareed.
9. Saxafada madaxa banaanka ee ka hoolgasha Galmudug waxaa looga digayaa sii deynta wararkasta oo abuuri kara xiisad siyaasadeed ama amni daro isla markaana kasoo horjeeda siyasada Dowlada
The post Golaha wasirada Galmudug yeeshay shir Deg Deg ah iyo Go’aamo ay soo saareen. appeared first on Ilwareed Online.
Xildhibaan Dalxa “Dowladda Dhexe Way Ka Gaabisay Xalinta Khilaafka Galmudug”